चन्द्रागिरीको आईपीओ भोलि बाँडफाँट हुँदै, के छ पर्ने सम्भावना - Lekhapadhi अर्थ : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
चन्द्रागिरीको आईपीओ भोलि बाँडफाँट हुँदै, के छ पर्ने सम्भावना
लेखक : लेखापढी ८ माघ २०७७, बिहीबार १२:२३ मा प्रकाशित
चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओ भाेलि शुक्रबार (माघ ९ गते) बाँडफाँट हुँदैछ । बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार आफ्नै कार्यालय नक्साल काठमाडौंमा बिहान १० बजे आइपीओ बाँडफाँड हुने कार्यक्रम तय भएको छ । कम्पनीको आइपीओ प्रि– अलोटमेन्ट बुधबार (माघ ७ गते) नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
कम्पनीले पुस २४ गतेदेखि सर्वसाधारणको आईपीओ बिक्रि खुला गरेको थियो । कम्पनीले एक सय रुपैयाँका दरले १५ करोड ३४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ लाख ३४ हजार ९१ कित्ता आइपीओ निष्काशन गरेको हो ।
चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले सेयर पाउन भने भाग्यमै पर पर्नुपर्नेछ । गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँट हुनेछ ।
कम्पनीको आइपीओमा कुल १२ लाख ५६ हजार ७४६ जनाले आवेदन दिएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । त्यसमध्ये ४५ हजार ६३१ वटा आवेदन रद्ध भएर १२ लाख ११ हजार ११५ वटा मात्रै योग्य आबेदन परेका छन् ।
क्लबहाउसको आइकनमा देखियो नयाँ लुक, को हुन् ति महिला ?
संक्रमणकालिन अबस्थामा श्रमिकको सारथी को ?
वादविवाद प्रतियोगितामा दोस्रो हुँदा: संस्मरण